I-Yijia Projection Twin Room-Kufuphi neNorthern College eManyaniswe neSibhedlele saseGrassland Road Indawo yasimahla yokupaka - I-Airbnb
I-Yijia Projection Twin Room-Kufuphi neNorthern College eManyaniswe neSibhedlele saseGrassland Road Indawo yasimahla yokupaka
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu娟儿
IAnyijia Hotel Apartment izibophelele ekuboneleleni abathengi ngendawo yokuhlala efudumeleyo yosapho, iqaqambisa ukusebenza kwegumbi ngalinye lokulala, ilungele abathengi abakumgangatho ophezulu onesitayile kunye nencasa.
Indawo yokupaka enikezelweyo yasimahla yokuziqhuba.
Butler inkonzo, fowuna nangaliphi na ixesha.
Igumbi lonke elikhethekileyo. Akukho ntlawulo yongezelelweyo.
Eli gumbi lihlobo yi-tatami series, linebhedi enye ephindwe kabini kunye notatami omnye.
Kukho oomatrasi belatex obutofotofo, iseti epheleleyo yezixhobo zombane ezikrelekrele, kunye negumbi lokubonisa lamkela intelekelelo yemitha yelifu, uqikelelo lwesikrini, usasazo oluphilayo, kunye nokujongwa kwi-Intanethi zonke zidityanisiwe.
Inkampani yokuhlamba ilinen yobuchwephesha iqinisekisa utshintsho olunye ngomthengi ngamnye.
Iimveliso zeshampu ziimveliso ezidumileyo zeshampu yakwaAdolf.
IApartment yeYijia ibekwe kwiXiangjiang Famous City International, kwiSithili saseQiaoxi, eZhangjiakou.
Ukujongana ne-Shangfeng Square, exhaswa yi-Dajingmen Jellyfish Palace Scenic Spot, kwaye ikufuphi ne-extra- ring Expressway, kukulungele ukuya e-Bashang Grassland kunye ne-Chongli Skiing, ukuthutha okufanelekileyo kunye nokufanelekileyo kuhambo lwezoshishino.
Inani leebhanki, iindawo zokutyela, ukuhlangabezana neemfuno zamanqanaba ahlukeneyo
Umbuki zindwendwe ngu- 娟儿
Iiyure ezingama-24 zenkonzo yomncedisi. nxibelelana nanini na
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Zhangjiakou